Evanjelin' i Barnabà - Wikipedia
Evanjelin' i Barnabà
Ny Evanjelin' i Barnabà na Evanjelin' i Barnabe na Filazantsaran' i Barnabasy dia asa soratra mitantara ny fiainan' i Jesoa nosoratan' olon-tokana na maro tsy fantatra anarana, izay mety ho Miozolmana, ka mety avy tamin' ny loharanon-tsoratra tranainy kokoa avy amin' ny Jiosy kristiana. Mety natao tamin' ny faran' ny taonjato faha-16 ny lahatsoratra amin' ny teny italiana sy espaniôla. Amin' ny lafiny maro, indrindra ny firesahana ny fiavian' i Mohamady (mpaminanin' ny Silamo), dia mifanaraka amin' ny fiheveran' ny Miozolmana ny Testamenta Vaovao io boky io.
Tsy mihevitra io boky io ho ambony lanja na latsa-danja noho ireo Evanjely kanônika kristiana ny Miozolmana, ary ny fikambanana silamo sasany dia mampiasa an' ilay boky mba hanohanan' izy ireo ny fiheverana silamo an' i Jesoa, ka io no ataon' izy ireo fa mirakitra ny marina momba ny fanomboana an' i Jesoa.
1.1 Asa soratra miozolmana
1.2 Tsy firindrana ara-potoana sy fahadisoana maro
Asa soratra miozolmanaHanova
Ity boky apôkrifa ity dia naka ny votoatiny avy amin' ny finoana silamo: fanoherana ny fampianaran' i Paoly sy fanoherana ny fampianarana momba ny Trinite, ny fanindriana mafy ny maha mpaminany fotsiny fa tsy zanak' Andriamanitra an' i Jesoa, fampahatsiahivana ny tenin' i Mohamady, fampahatsiahivana ny fiekem-pinoana silamo (shahada) ao amin' ny toko faha-39. Ankoatra izany dia manambara io evanjely io fa tsy tratran' ny fanomboana amin' ny hazo fijaliana i Jesoa, satria nakarin' Andriamanitra any am-Paradisa, fa i Jodasy, izay lasa nitovy endrika aminy, no nohomboana (dôketisma). Ireo finoana ireo, indrindra ny fandavana ny maha Andriamanitra an' i Jesoa sy ny fandavana ny fanomboana azy, dia mifanaraka amin' ny fampianaran' ny Miozolmana. Misy singa maro, izay angamba avy amin' ny loharano jodeô-kristiana ao amin' io evanjely io, izay nampiasain' ilay mpanoratra miozolmana. Ity boky ity, hoy ny mpandika maro, dia ezaka fampiraisana singa avy amin' ny kristianisma sy ny silamo, azo ampitahaina amin' ireo tahirin-kevitra nosoratan' ireo Miozolmana tao Afrika Avaratra sy tao amin' ny Saikanosy Iberika izay nanohitra ny Trinite tamin' ny taonjato faha-16 sy faha-17 ity boky ity.
Tsy firindrana ara-potoana sy fahadisoana maroHanova
Maro ireo mpandinika izay nahita tsy firindrana ara-potoana sy fahadisoana ara-jeôgrafia ao amin' ny Evanjelin' i Barnabà.
Voalaza fa niondrana an-tsambokely teny ambonin' ny Ranomasin' i Galilea (izay atao hoe koa Farihy Tiberiada na Tiberiasy) hatrany Nazareta i Jesoa ka niondrana tao Kafarnahoma/Kapernaomy (toko faha-20-21). I Nazareta anefa tanàna any anaty tany fa tsy a-morontsiraka ary i Kafarnahoma dia tanàna miorina eo amoron' ilay farihy. Misy ny mpanoratra manohana ny fahamarinan' ireo zava-boalaza ireo amin' ny alalan' ny tsy fahafantarana marina ny tena nisy ny tanànan' i Nazareta.
Voalaza koa fa teraka tamin' ny andro nanapahan' i Pontio Pilato i Jesoa, nefa izany fanapahana izany fia nanomboka tamin' ny taona 26.
Ny mpanoratra an' ilay evanjely dia tsy mahalala fa ny hoe Kristy sy ny hoe Mesia dia teny mitovy hevitra, satria ny hoe Kristy (χριστός / khristos) dia fandikana amin' ny teny grika ny teny hebreo avy amin' ny teny hebreo hoe "Mesia" (מָשִׁיחַ / Mashiakh), izay samy midika hoe "voahosotra". Noho izany, ny Evanjelin' i Barnabà dia disoa raha manao an' i Jesoa hoe "Jesoa Kristy" (ara-bakiteny: "Mesia Jesoa"), tamin' ny filazany fa "Niaiky i Jesoa sady niteny ny marina hoe: 'Tsy izaho no Mesia' " (toko faha-42).
Misy fampahatsiahivana ny jobily izay lazainy fa miseho isaky ny zato taona (toko faha-82), fa tsy isaky ny dimampolo taona (araka ny amaritan' ny Bokin' ny Levitikosy azy). Izany tsy fifanarahan' ny fotoana izany dia ahafaha-mamantatra ny fotoana nanoratana an' ilay evanjely apôkrifa, satria namoaka didy ny amin' ny jobily zato taona ny papa Bônifasy VIII (papa tamin' ny taona 1294-1303), fanapahan-kevitra izay tsy narahin' ny papa Klemento VI (papa tamin' ny taona 1342-1352) izay namoaka didy, tamin' ny taona 1343, ny hiverenana indray amin' ny jobily dimampolo taona araka ny fanao nifandovana.
Lazain' ilay evanjely fa nihinana paoma i Adama sy i Eva (toko faha-40). Izany fiheverana ilay voankazo voarara (Bokin' ny Genesisy 2.9,17; 3:5) ho paoma izany dia fandikana diso ny teny latina hoe malus izay ampiasaina ao amin' ny fandikan-teny latina ao amin' ny Volgata hanondroana ny "ratsy" fa tsy io hazo paoma (izay atao amin' ny teny latina hoe malus ihany koa).
Miresaka ny amin' ny divay tehirizina anaty barîka hazo ny Evanjelin' i Barnabà (toko faha-152). Ny barîka hazo tamin' izany fotoana sandohana ho nanoratana azy izany anefa dia mampiavaka ny vahoaka gaoloà sy ny tapany avaratr' i Italia, nefa i Palestina tamin' izany fotoana izany dia nitahiry divay tanaty karazana siny atao amin' ny teny latina hoe amphora na amin' ny teny grika hoe αμφορέας / amphoreas.
Ao amin' ny toko faha-91, ny "efapolo andro" dia manondro fifadian-kanina isan-taona. Izany dia mifandraika amin' ny fomba kristiana izay mifady hanina mandritra ny efapolo andro amin' ny karemy, fanao tsy ahitana porofo ny fisiany talohan' ny Kônsily voalohany tany Nikea (taona 325). Tsy nisy toraka izany koa ny fifadian-kanina efapolo andro ao amin' ny jodaisma tamin' izany fotoana izany.
Amin' ny fampidiran' ny Evanjelin' i Barnabà andalana avy ao amin' ny Testamenta Taloha dia hita fa ny avy ao amin' ny lafatsoratra latinan' ny Volgata no nakany azy fa tsy avy ao amin' ny lahatsoratra grikan' ny Septoajinta (na Septanta) na ny lahatsoratra hebreo masôretika. Ny lahatsoratra ao amin' ny Volgata anefa dia dikan-teny nataon' i Hierônimo (na Jerôma) nanomboka tamin' ny taona 382, izany hoe taonjato maro taorian' ny fahafatesan' i Barnabà (na Barnabe na Barnavasy) (taona 61 taor. J.K.).
Boky apôkrifa lazaina fa nosoratan' i Barnabà:
Evanjelin' i Barbnabà
Epistilin' i Barnabà
Asan' i Barnabà
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Evanjelin%27_i_Barnabà&oldid=1013441"
Dernière modification le 8 Aogositra 2021, à 10:34
Voaova farany tamin'ny 8 Aogositra 2021 amin'ny 10:34 ity pejy ity.